နော့ဆူဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
(နော့ဆူ ဘာသာစကား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြောက်ပိုင်း ယီ၊ လျင်ရှန် ယီ၊ စီချွမ် ယီ
၂သန်း (2000 census)
နော့ဆူ သို့မဟုတ် (နောဆူ ꆈꌠꉙ Nuosuhxop)ကို ''မြောက်ပိုင်းယီ၊ လျန်ရှန်ယီနှင့် စီချွမ်ယီလူမျိူးဟု လူသိများသည်။ ယီလူမျိုးတွင် ယီဘာသာစကားကို တရုတ်အစိုးရကတိုင်းရင်းသားဘာသာအဖြစ်ရွေးချယ်ထားပြီး စာသင်ကျောင်းများ၌ တရုတ်ဘာသာနည်းတူပြောဆိုသုံးစွဲခွင့်ပေးထားပါသည်။ ၎င်းဘာသာကို (၁၉၉၄ခုနှစ်ခန့်မှန်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သန်းခေါင်စာရင်း)အရ လူ၂သန်းခန့်ရှိပြီး လူဦးရေ၏ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းသည် မိခင်ဘာသာကိုသာပြောဆိုနိုင်ကြပါသည်။ နော့ဆူတို့၏ ဘာသာစကားတွင်နော့ဆူ / ယီ အမည်ဖြစ်ပြီး မန်ဒရင်းတရုတ်ဘာသာ၌ အသုံးမပြုပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အသံထွက်အတွက်စာလုံးပေါင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း နော့ဆူဆိုသည့်စကားလုံးသည် တရုတ်စာလုံးများတွင်အဓိပ္ပါယ် မရှိပါ။ 
ယီရှေးဟောင်းစာသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာ ဂရပ်ဖစ် စနစ် ၈၀၀၀ – ၁၀,၀၀၀ အထိရှိသည်။ စာသားတည်ဆောက်ပုံသည် တရုတ်စာလုံးများ နှင့်ဆင်တူသော်လည်း အရုပ်စာသင်္ကေတများသည်ပုံစံချင်းမတူဘဲတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
ယီစာအသစ် ( ꆈꌠꁱꂷ nuosu bburma [nɔ̄sū bʙ̝̄mā] ''နော့ဆူ ကို ') တစ်ဦးစံတစ်ခုဖြစ်သည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ၏ဒေသန္တရအစိုးရတို့က 1974 ခုနှစ်အတွက်ဂန္ script ကိုမှဆင်းသက်လာ တရုတ် ။ ၎င်းကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင်ယီဘာသာ၏တရားဝင်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။ လျင်ရှန်စကားပေါ်တွင်အခြေခံသည့် အရုပ်စာသင်္ကေတ ၇၅၆ ခု၊ တရုတ်မှ မွေးစားစာလုံးများတွင်သာတွေ့ရှိသော syllables ၆၃ ခုရှိသည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင်တရုတ်အစိုးရသည်ရောမအက္ခရာကို အခြေခံသည့်စကားလုံးဖြစ်သောဂလင်းစတုတ် Porteous အက္ခရာကို တီထွင်ပေးခဲ့သည်။  (သည်နောက်ပိုင်း၌ ယီစာပေဖြင့် ပြန်လည်အစားထိုး အသုံးပြုခဲ့သည်။ )
အများပြည်သူပန်းခြံတစ်ခုအတွင်း ယီခေတ်သစ်ဘာသာစကားကို တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတို့ဖြင့် ပူးတွဲဖော်ပြထားခြင်း။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Sichuan Yi"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ (4 ed.)။ Minzu University of China Press။ 2006။ |title= လွဲမှား သို့ မပါရှိ (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နော့ဆူဘာသာစကား&oldid=683219" မှ ရယူရန်
Yiဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။